Global Voices teny Malagasy » Global Voices teny Espaniola Mpitsara fifaninanana fanaovan-gazety Bottup · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Marsa 2010 8:11 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Espaina, Fiteny, Media sy Fanoratan-gazety, Zavakanto & Kolontsaina
Manaiky ny fisoratana handray anjara amin'ny fifaninanana fanaovan-gazety andiany faharoa  hatramin'ny faha-15 marsa ho avy izao ny vohikalam-panaovan-gazety Espaniola Bottup . Hotondroina ho “Solontena manokan'” ny Bottup ary homena loka fandehanana maimai-poana any amin'izay toerana rehetra tiany hanaovana fanadihadiana (€1800 farafahabeny) izay mandresy amin'izany.
Tafiditra ho anisan'ny mpitsara hifantina izay homena ny loka amin'izany ny tonian'ny Global Voices teny Espaniola , Juan Arellano  avy any Però.
Azonao jerena manontolo ato ny andinindininy rehetra momba izany  (teny Espaniola).
Tamin'ny andiany voalohany  [ES] tamin'ity fifaninanana fanaovan-gazety avy amin'olo-tsotra Bottup ity tamin'ny 2008 moa dia telo no nahazo ny loka  [ES] tamin'ireo sokajy samihafa, nofantenina avy tamin'ny mpandray anjara miisa 214.
Nahazo ny loka tamin'izany i Ágata Mata Bermúdez avy any Málaga izay namoaka lahatsoratra “La Iglesia: comunión y celíacos “. Nahazo loka ihany koa ny tantara “Adoptar millones de sonrisas “ nosoratan'i Eduardo Marin Raboso. Ary ny Farany nahazo loka dia i Olga Pardo Ayuso noho ny tantara hoe “Alimentar a los coches o alimentar a las personas “.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/02/5180/
 fifaninanana fanaovan-gazety andiany faharoa: http://www.bottup.com/periodistaciudadano/ii-citizen-journalist-awards
 Global Voices teny Espaniola: https://es.globalvoicesonline.org
 jerena manontolo ato ny andinindininy rehetra momba izany: http://www.bottup.com/periodistaciudadano/bases/
 andiany voalohany: http://www.bottup.com/periodistaciudadano/IPPC/index.html
 telo no nahazo ny loka: http://www.bottup.com/200806193485/Medios/el-primer-premio-periodista-ciudadano-ya-tiene-ganadores.html
 La Iglesia: comunión y celíacos: http://www.bottup.com/200805043122/Denuncia/la-iglesia-comuni-celos.html
 Adoptar millones de sonrisas: http://www.bottup.com/200806133432/Ciudadania/adoptar-millones-de-sonrisas.html
 Alimentar a los coches o alimentar a las personas: http://www.bottup.com/200805283302/Cambio-Climatico/alimentar-a-los-coches-o-alimentar-a-las-personas.html